Webhusaiti Dhizaini Bellevue Washington
Isenselogic.com inovaka sei mawebhusaiti ako
Kuvaka webhusaiti kune rako bhizinesi rinoda kutanga kubva pasi kumusoro neapi mazwi akakosha ari kushandiswa nevanhu kuwana masevhisi ako. Kana yako webhusaiti isina kugadzirirwa kune injini dzekutsvaga vangangove vatengi vatsva vari kuenda kune vako vanokwikwidza.
Nhanho 1: Kuwana Musika Bhizinesi Kuongorora
Ongorora yako Website. Isu tinotarisa meta seti / mazwi akakosha, anoonekwa mavara uye kodhi kuti uone kuti iwe webhusaiti yakamisikidzwa sei kune makuru mainjini ekutsvaga. Semuenzaniso, zvemukati mako zvakaenderana sei nemazwi akakosha arikutsvaga vatengi?
Ongorora vakwikwidzi vako. Isu tinoongorora iwo mawebhusaiti evanokwikwidza ako ari munzvimbo dzepamusoro shanu nzvimbo kuti tione yakanakisa nzira inoshanda yekutsvaga injini kuiswa.
Target mazwi anonyanya kushanda. Isu tinogadzira yakasarudzika rondedzero yezvakanangwa mazwi akakosha zvichibva pane izvo vatengi vari kutsvaga. Chii chaunganyora muinjini yekutsvaga kuti uwane bhizinesi rako kana peji rewebhu? Isu tinobva tatora iro rakakosha uye nekushandisa Google keyword kuronga iyo yatinowana zvakavanzika mazwi iwe unogona kunge usina kufunga nezvazvo. Isu tinoshandisawo keyword kuronga kuti tione iyo chaiyo nhamba yevatengi vanotsvaga chaiwo mazwi akakosha uye tarisa iwo iwo ekuwedzera mari yebhizinesi.
Nhanho 2: Keyword Kubudirira uye Tsvagiridzo
Keyword ongororo: Kubva pane yedu runyorwa rweakakosha mazwi, isu tinoona yakanangwa runyorwa rweakakosha mazwi uye zvirevo. Ongororo yemashoko kubva kune imwe indasitiri uye masosi. Shandisa yekutanga runyorwa rwemazwi akakosha uye sarudza huwandu hwekutsvaga injini mibvunzo. Isu tinobva tarisa mazwi akakosha nezvakawanda, zvirevo nemitsara.
Zvinangwa nezvinangwa. Isu tinotsanangura zvakajeka zvinangwa zvako pamberi kuitira kuti tikwanise kuyera kudzoka kwako pane mari kubva kune chero imwe chirongwa chekushambadzira chaunotanga. Semuenzaniso, chinangwa chako chinogona kunge chiri chekuwedzera makumi matatu muzana mubhizimusi traffic. Kana iwe ungangoda kuvandudza yako yazvino shanduko mwero we30 muzana kusvika 2 muzana.
CHITATU 3: KUSVIRA KUZVIMBISIRA UYE KUZIVISA
Gadzira mazita emapeji. Keyword-based mazita anobatsira kumisikidza peji rako theme uye kuyerera kwemazwi ako. Gadzira meta tag. Meta tag tsananguro uye kubatsira kukurudzira kudzvanya-kuburikidza asi hazvishandisirwe zvakananga kuera. Isa nzvimbo dzekutsvaga dzekutsvaga pamapeji. Sanganisa mazwi akasarudzwa muwebhusaiti yako kodhi kodhi uye zviripo zvirimo pamapeji akasarudzika. Isu tinoona kuti tinoshandisa zvinongedzo zvinongedzo zveimwe kusvika kumatatu mazwi akakosha pane peji rezvinyorwa uye nekuwedzera mamwe mapeji kupedzisa runyorwa. Isu tinoona kuti mazwi akakosha anoshandiswa anoshandiswa sekuisirwa kwepanyama kwemazwi ako. Inobatsira injini dzekutsvaga nekukurumidza kuona kuti iro peji nderei. Maitiro echisikigo anoshanda zvakanyanya. Mazhinji bvunzo anoratidza kuti mapeji ane 800 kusvika 2000 mazwi anogona kukunda mapfupi. Mukupedzisira, vashandisi, musika, zvemukati zvinongedzo zvinotarisa mukurumbira uye nhamba dzemanhamba
Nhanho 4: Simbisa kuti webhusaiti yako inoshamwaridzika
Zvinoenderana neGoogle tsvagiridzo zhinji dzinoitwa pane nharembozha pane zvigadzirwa zve desktop. Mukupindura Google yashandura zviyero zvekutsvaga kutsvaga masayiti ane hushamwari. Kana yako webhusaiti yazvino isiri yefoni inoshamwaridzika uri kurasikirwa nevatengi.
Nhanho 5: Kuenderera mberi Kuedzwa uye Kuyera
Kwayedza uye chiyero: Ongorora yekutsvaga injini masosi uye webhu traffic kuona kushanda kwezvirongwa iwe zvawateedzera, kusanganisira kuongorora kweayo ega kiyi kodhi kuita. Edza mhedzisiro yeshanduko, uye chengeta shanduko dzakateedzerwa mune ye Excel spreadsheet, kana chero chaunofara nacho.
Kugadziriswa. Kuenderera mberi kwekuwedzera nekushandurwa kwemazwi akakosha uye zvemukati webhusaiti zvakakosha kuti urambe uchivandudza injini dzekutsvaga kuitira kuti kukura kusamise kana kuderera kubva mukuregeredzwa. Iwe zvakare unoda kuongorora yako yekubatanidza zano uye kuona kuti yako inbound uye outbound zvinongedzo zvinoenderana kune rako bhizinesi. Iyo blog inogona kukupa iwe inodiwa mamiriro uye nyore kweyemukati yekuwedzera iyo iwe yaunoda. Wako hosting company inogona kukubatsira iwe ne setup / kuisirwa blog.
Goverana iri peji